Mareykanka oo laga sugayo in go’aan ka gaaraan lacag gaareysa 7 bilyan oo Afganistan leedahay | Allbanaadir.com
Home NEWS Mareykanka oo laga sugayo in go’aan ka gaaraan lacag gaareysa 7 bilyan...
Mareykanka oo laga sugayo in go’aan ka gaaraan lacag gaareysa 7 bilyan oo Afganistan leedahay
Bangiga Keydka ee Maraykanka ee kuyaalla magaalada New Yor waxaa ku xaniban lacag gaareysa 7 bilyan oo doolar oo leedahay dowlada Afganistan, waxaana go’aan ka gaarista lacagtan laga sugayaa maamulka Madaxweyne Biden.
Maxkamad ku taalla Mareykanka ayaa qoraal ay u dirtay Madaxweyne Biden kaga dalbatay in ay cadeeyaan sidii laga leeli lahaa lacagtan faraha badan ee leedahay dowlada Afganistan ee ku xaniban bangiga Keydka Mareykanka.
Qoraalka ayey maxkamadda uga dalbatay maamulka Biden ilaa 11-ka bishan in ay kusoo cadeeyaan saddex arrin oo lacagtaasi laga yeelayo midood ; in lacagtaas si abid ah loo xannnibo, in Afghanistan loo celiyo, ama in la siiyo qoysaska dhibbanayaashii weerarkii 11-kii September ee 2001-dii.
Garsooraha maxkamadda ayaa labo mar kordhiyey wakhtiga si uu dawladda u siiyo in ay sharci ahaan kala hufto keyska, hase yeeshee qareenka u dooddaya illaa 150 ka tirsan xigatada dhibanayaanshii 9/11 oo lagu magacaabo Anderw Maloney ayaa sheegay in lacagtan ay ahayd in go’aan laga gaaro xilli hore.
Dalka Afganistan oo talladiisa la wareegeen kooxda Taalibaan ayaa xiligan waxaa ka jira xaalad adag oo dhinaca dhaqaalaha, waxa ayna dad badan ku baaqeen in lacagta Mareykanka ku xaniban dib loogu celiyo dalkaasi si dhibaatada jirta wax loogu qabto.
Previous articleOdayaasha iyo Bulshada soo xuleysa Ergada kuraasta Hop263 iyo HOP241 oo la shaaciyay
Next articleA Call for Regulating Expensive Private Hospitals in Mogadishu